London Iji Paris Na 2:20 awa Site The Eurostar Train | Save A Train
Home > Travel Europe > London Iji Paris Na 2:20 awa Site The Eurostar Train
Oge Ọgụgụ: 10 nkeji
Otu n'ime ihe ndị kasị na kacha ụzọ njem n'etiti London na Paris bụ site na Eurostar, na elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè ejikọta abụọ n'isi obodo. Ezie na e nwere a plethora nke nhọrọ maka njem na-achọ ime ka iwuli elu, na Eurostar anọgide na otu n'ime ndị kasị mma nhọrọ maka ọsọ, na-eri, na ala. The ụgbọ okporo ígwè na-ewe uru nke mmiri n'okpuru osimiri ọwa ọwara, ma ọ bụ “chunnel,” wuru n'agbata England na France iji nweta gị ọsọ ọsọ ị na-aga.
n'okpuru ebe, i nwere ike ịhụ ihe niile nkọwa ị chọrọ enyemaka gị jikwaa gị London na Paris Eurostar njem.
Isiokwu a na-dere ịkụziri ahịa banyere ụgbọ okporo ígwè njem na e mere site Save A Train, Weebụsaịtị ndị ụgbọ oloko dị ọnụ ala na Europe.
Mere Travel Europe Site Train?
Tupu anyị na-amalite, Ka anyị chọpụtagodị ihe kpọmkwem mere Europe na-kacha mma nwetara site na ụgbọ okporo ígwè njem- ka emechara, a Afrika e mmadụ bi ruo ọtụtụ puku afọ, nke pụtara ya akụrụngwa na-ukwuu mepụtara. Ọzọ ụdịdị nke njem bụ mfe dị, ma e nwere ihe ka ga-ekwu maka ebube ndọrọ nke ụgbọ okporo ígwè njem. Nke a bụ eziokwu maka ndị njem oge mbụ, onye nwere ike jiri usoro ụgbọ oloko mbanye n'ụgbọ obere oge ọ ga -apụ. Nke a bụ na miri iche Europe ọdụ ụgbọelu, ebe gị kacha nta mbata oge tupu ọpụpụ bụ dịkarịa ala awa abụọ, na ị na-eji oge ndị ọzọ na ego n'ụzọ ọdụ ebe.
Ekwu okwu nke na njem oge, Europe na-a maara nke ọma n'ihi na ya na elu-ọsọ ụzọ ụgbọ okporo ígwè, nke anya ịkarị ókè ya asọfe motorways na inconveniently odude ọdụ ụgbọelu. Ụgbọ oloko ofụri Afrika na-adị ngwa mgbe na kpọmkwem, nke pụtara obere oge n'ụzọ na ndị ọzọ oge ịgagharị.
N'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-enwe na uru nke a na-conveniently emi odude ka isi njem nleta ebe na-adọrọ mmasị, yabụ ọ dị mfe ịpụ n'ụgbọ oloko gị wee gawa ebe ị na -aga.
N'ikpeazụ, gbaa ụgbọ okporo ígwè ndị ọzọ yana idobe okirikiri, ikwe gị wetara ibu na-ahọrọ oche-enweghị akwụ ụgwọ hefty ọzọ ụgwọ.
All nke a bụ na-ekwu na, mgbe Europe nwere ọtụtụ nhọrọ maka njem, ọ dịghị ihe gbagwojuru ndị ezi ochie ụgbọ okporo ígwè na njem.
London na Brussels Eurostar train
London na Paris Eurostar train
Lyon na London Eurostar train
London na Amsterdam Eurostar train
Ntinye akwụkwọ gị tiketi On A Eurostar Train
Otu njiri mara kacha mma nke iburu ụgbọ oloko na ụgbọ elu bụ na Eurostar na-esite n’etiti obodo gaa n’etiti obodo. N'adịghị ka anya ọdụ ụgbọelu dị ka London Heathrow na Paris Charles De Gaulle, ụgbọ oloko gị departs si London St-Pancras International na-abịa Gare Du Nord, ebe ị nwere ike mfe na-eje ije nile nke obodo kasị mma nlegharị anya.
dị ka e kwuru, niile Eurostar tiketi gụnyere ihe abụọ iberibe ibu na akpa aka. Ọ bụrụ na ị na-eweta ọtụtụ nke akpa, ị nwekwara ike ịhọrọ tiketi klaasị dị elu nke na -enye gị ohere iwetakwu akpa. Na ntule ndịiche, mmefu ego ụgbọ elu nwere ike ikwu na ihe mbụ ha ntinye akwụkwọ, ma bag ụgwọ na oche nhọrọ ebubo ngwa ngwa tinye.
Tiketi ahịa maka njem a na-agbanwe a ọtụtụ, n'ihi ya, anyị nwere ike ikwu ịzụ tiketi ka anya dị ka ị na-enwe ike. -ekwu, ndị a tiketi na-aga na-ere ọnwa atọ tupu, ezie na dabere na oge i nwere ike na-ahụ na ha ruo ọnwa isii tupu. Anyị na-akwado na iji website ịhụ na akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè, nke na -enyocha ngwa ahịa niile dị na akpaghị aka iji nweta ọnụ ahịa ga -ekwe omume, na-ekwe nkwa.
London na Antwerp Eurostar train
Lille na London Eurostar train
London na Strasbourg Eurostar train
London na Rotterdam Eurostar train
Ịnye ọnụahịa na Types Of Tickets
The Eurostar ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ atọ na klas cabins, dabere na gị ego. N'ihi na ndị na nanị na-achọ na site n'otu ebe gaa ebe ọzọ, Tiketi klaasị nke abụọ bụ nhọrọ gị kacha mma. Ndị na-azụ ahịa njem nwere ike kama na-ahọrọ Standard Premier ma ọ bụ Business Premier tiketi, ma nke ekwe ka ị na-anọdụ ala na mbụ na klas na-azụ na-enye nri n'oge njem gị, yabụ ka anyị mụta ntakịrị ihe banyere tiketi ụgbọ oloko London na Paris:
ụgbọ Type eji enyere ndụ aka mmachibido
Nke abụọ na klas
2 iberibe akpa na otu akpa aka gụnyere
Seat oke dị mgbe ntinye akwụkwọ
Food maka zụọ
Anaghị akwụghachi. Tupu ụgbọ okporo ígwè ọpụpụ, ị nwere ike ịgbanwe gị tiketi. A mgbanwe ego nke 40 Euro na ụgbọ dị iche na-emetụta. Ọ bụrụ na ndị ọhụrụ tiketi bụ obere oké ọnụ karịa na mbụ tiketi, na price iche ga-refunded.
Kwalite oche Njirimara karịa legroom na a adịchaghị ahụmahụ
A ìhè nri na ọṅụṅụ ga na-eje ozi na oche gị
Anaghị akwụghachi. Tupu ụgbọ okporo ígwè ọpụpụ, ị nwere ike ịgbanwe gị tiketi. A mgbanwe ego nke 50 Euro na ụgbọ dị iche na-emetụta. Ọ bụrụ na ndị ọhụrụ tiketi bụ obere oké ọnụ karịa na mbụ tiketi, na price iche ga-refunded.
3 iberibe akpa na otu akpa aka gụnyere
Siri nri-e nri na champeenu ga na-eje ozi na oche gị
Access ka nanị ezumike tupu ọpụpụ
Tagzi ntinye akwụkwọ ọrụ dị
Free cancellations na-akparaghị ókè mgbanwe ruo 60 ụbọchị mgbe ọpụpụ na niile ụzọ gasị n'etiti UK, France, na Belgium.
Free cancellations na-akparaghị ókè mgbanwe ruo ọpụpụ na kpọmkwem ụzọ n'etiti ndị UK na Netherlands, plus free mgbanwe na anọ ụzọ (Thalys / Eurostar via Brussels) ruo ọpụpụ.
Dị ka anyị na-na na kwuru n'ihu, ịnye ọnụahịa dịgasị dị ka njem gị ụbọchị, ya mere na ị ga-achọ ka akwụkwọ ozugbo nnweta-emepe. Ọ bụrụ na ị na -ede akwụkwọ nke ọma tupu oge eruo, ị ga-achọ na-akwụ banyere 55 Dollar otu ụzọ, ma ọ bụ 90 Dollar njem okirikiri. Ichere ruo mgbe ikpeazụ nkeji nwere ike ụgbọala ahịa igwe na-elu, na-akwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta na ibawanye gasịrị ị zụrụ gị tiketi. Nke a bụ eziokwu n'ihi na ma njem okirikiri na otu ụzọ na-tiketi.
Ọ dị mma ịmara na Eurostar adịghị maka ndị niile na -ejide njem ụgbọ oloko, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ime njem a na -adọrọ adọrọ ma dịkwa ọnụ ala, ịzụta ụgbọ oloko gị tiketi tupu. Ị nwere ike ịchọta ụgbọ oloko tiketi online na dị iche iche weebụsaịtị, ezie na ụgbọ okporo ígwè tiketi ahịa nwere ike inflated tụnyere Save A Train.
Calais gaa London Eurostar ụgbọ oloko
Ruggbọ oloko na London Eurostar train
Ndị Hague na London Eurostar Trains
Eurogbọ oloko Berlin na London Eurostar
Lelee-Na Mgbe London St-Pancras Station
Dabere na gị ụgbọ klas, ị ga-chọrọ na-abata na gị ọpụpụ ebe ọ dịkarịa ala 40-60 Nkeji ole na ole tupu ụgbọ oloko ahụ si London gawa Paris. Ọ bụrụ na ịdebere tiketi Premier Premier klaasị mbụ site na London ruo Paris, ị ga-enwe ohere na-ekewaghị ekewa ezumike. Ma ọ bụghị ya, na e nwere ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị ka ị na-peruse. Ụfọdụ n'ime anyị mmasị ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-agụnye:
AMT Coffee – A ụlọ ahịa kọfị na abụọ ebe n'ime ụgbọ. Ọ na-enye ejiri mee ọṅụṅụ na n'ụzọ zuru ezu compostable iko, nke na -eme ka gburugburu ụwa na -amụmụ ọnụ ọchị.
Gbọmgbọm volt – A omenala English ụlọ mmanya na-enye craft beers, ezigbo ale, gins, kọfị, na mmụọ. Ọ na-na-eje ozi nri ụtụtụ na kpochapụwo ụlọ mmanya ụgbọ.
Chop'd – A ike-okowụk restaurant, Chop'd na -enye ofe dị iche iche, salads, stews, ma kechie ụdị njem niile.
Ke edinam na ị na-na na-eme ka a ụbọchị njem, ọdụ na-atụmatụ ekpe-akpa ebe n'ihi na ị na-echekwa gị ibu. Ndị a nchekwa nhọrọ dị ọnụ ala ma na-enye ogologo ọrụ awa.
Cologne na London Eurostar train
Ghent na London Eurostar Trains
Middelburg na London Eurostar train
Leiden na London Eurostar train
Ozugbo on board, ngụkọta njem oge si London na Paris bụ mkpokọta 2 awa na 16 nkeji. Jikọtara na gị tupu ọpụpụ mbata, gị ngụkọta njem oge ga-abụ na 3 awa.
The ụgbọ okporo ígwè na ya na atụmatụ ọkọlọtọ aba nakwa dị ka tebụl na-ekwe ka ị na-arụ ọrụ na-eri na ala. Ndị a na-akwụkwọ bilie n'isi, ezie, wee jide n'aka na-eburu n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ị ga-amasị. N'agbanyeghị ebe ị na-anọdụ, ị na-ekwe nkwa na-enwe ezi legroom na plọg na-ana gị na ngwaọrụ.
Ka kpọtụrụ aha na mbụ, enwere WiFi efu na ụgbọ, otú i nwere ike na-na niile gị email na-elekọta mmadụ media mkpa. Dabere na gị tiketi, ị nwekwara ike isi iri nchịkwa, ebe ị pụrụ ịchọta nri, ọṅụṅụ, na snacks. Ọ bụrụ na ị na-nọ ọdụ na a mbụ na klas ụlọ, nri ga-ozugbo na oche gị.
Dusseldorf na London Eurostar train
Essen gaa London Eurostar train
Munster na London Eurostar train
Leuven na London Eurostar train
Abịa Mgbe Paris Gare Du Nord Train Station
Ụgbọ oloko si St. Pancras ojii na-abata n'etiti Paris, na Gare du Nord ojii. Nke a ọmarịcha ebe bụ a ọrụ nkà n'onwe ya, na ya facade wuru na ufọt ufọt 1800 ma nọgidere na-enwe mara mma. Wepụta oge na-enwe ụlọ tupu n'isi ịga leta obodo.
N'ihi na ị ga-ama okụre ego-na tupu ịhapụ UK ị ga-adịghị mkpa iji wuchaa ihe mbata usoro. Nke a bụ-ugbu a na ezi maka paspọtụ akara, ezie na UK ahapụ EU o yiri ka ndị a Filiks ga-anata ịrịba mgbanwe.
Ozugbo ị na-abata, ị ga-abụ na obi nke obodo, na Ọtụtụ nhọrọ maka nri, ụlọ ahịa, na ọṅụṅụ. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-ahapụ ụlọ ọrụ, ị ga-ahụ ndị dị nso Brasserie Terminus Nord, ụlọ oriri na ọ Artụ Artụ Art Nouveau a ma ama ozugbo gafere okporo ụzọ ụgbọ oloko. Ma ọ bụghị ya, ị chọrọ nanị iji na-awagharị na-ọ bụla direction chọta ụfọdụ ndị kasị mma oriri na ọṅụṅụ na Europe.
N'ime ụgbọ okporo ígwè na ya, ị ga-ahụ Metro na RER ụgbọ oloko, nakwa dị ka ụgbọ oloko njem ofụri France. Obodo rails na Metro ụgbọ oloko nwere ike ị niile ofụri French isi obodo, ka ọtụtụ ndị ngosi ihe mgbe ochie, veranda, na-eme njem nleta na-adọrọ mmasị n'ime.
Ọ bụrụ na ị na-abịarute n'oge na-aga kpọmkwem si ịgagharị tupu ị na-elele na-na gị hotel, ya nwekwara ike ịbụ ezi echiche na-uru nke ekpe-akpa nhọrọ dị n'ime ụgbọ okporo ígwè. Ndị a nchekwa ụlọ ọrụ na-dịtụ ọnụ na pụrụ ịbụ ihe ndị magburu onwe nhọrọ maka ndị na-achọ ka jirichaa ha ụbọchị.
Dị ka onye na -ejide tiketi ụgbọ oloko Eurostar, ị ike nweta 2 maka 1 ohere ọtụtụ n'ime ndị ngosi ihe mgbe ochie na veranda, nke nwere ike ịzọpụta gị ọtụtụ narị dollar.
Frankfurt na London Eurostar train
Munich na London Eurostar train
Ndị na-ebugharị ụgbọ oloko na London Eurostar train
Marseilles ruo London Eurostar train
Train Times N'ihi London Iji Paris na Eurostar
The Eurostar agba mgbe, na ruo 19 ọpụpụ kwa ụbọchị dabere na ezumike na ngwụsị izu. The mbụ ụgbọ okporo ígwè nke ụbọchị napu apu na 05:40 na-ewe a ngụkọta nke 2 awa na 37 nkeji. Nke a bụ mgbe otu n'ime ndị dị ọnụ ala tiketi dị, ma ọ bụrụ na ị na-egbughị oge n'ịza nēbili n'isi i nwere ike zọpụta ụfọdụ ego na gaba na ezumike nke chi ọbụbọ. Uru ọzọ a n'oge opupu bụ na mbata gị oge na Paris bụ 09:17, nke pụtara na ị nwere a ụbọchị zuru n'ihu gị maka ihe ọ bụla na-eme ị ga-amasị họrọ.
Nsoro ugboro bụ na uzọ ọzọ hour obula ma ọ bụ karịa, nke na-enye gị ọtụtụ nhọrọ nke na-ahọrọ. The ụgbọ okporo ígwè ikpeazụ nke abalị napu apu na 18:31 na-abịarute na 21:47, ahapụ gị ọtụtụ oge na-esi na gị hotel ma ọ bụ ọbụna gaba maka a abalị nri na a peek na-egbukepụ egbukepụ ọkụ nke eiffel tower. Ndị a abalị ụgbọ oloko nwere ike Njirimara sleeper ụgbọala, nke bụ a ezi ụzọ na-jidere a nkeji ole na ole nke na-ehi ụra n'ihu iso na njem gị. Ọzọkwa, ụfọdụ ụgbọ oloko nwere ike njem n'etiti ewu ewu na ebe n'abalị dum.
Den Helder na London Eurostar train
Maastricht na London Eurostar train
Dijon gaa London Eurostar train
Bonn na London Eurostar train
Rozọ Ndị Ọzọ Na Tragbọ Eurostar nke Na-abụghị London Ga Paris
Ezie na isiokwu a na-elekwasị anya tumadi na njem n'etiti St. Pancras International Station na Gare Du Nord, na Eurostar nwekwara-arụ ọrụ a nọmba nke kpọmkwem ụzọ gasị si London:
Brussels – Ụgbọ oloko na-agba ọsọ ọ bụla 90 nkeji 2 awa. Ọ na-ewe nanị ihe karịrị 2 ọtụtụ awa iji rute Brussels Midi / Zuid ojii.
Calais / Frethun- Ụgbọ oloko na-agba ọsọ hour obula ma ọ bụ karịa site na London na ngụkọta ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ nanị ihe karịrị otu awa.
obere- Ụgbọ oloko na-ahapụ ihe fọrọ nke nta hour obula na Lille, emi odude ke edem edere France. E nwere ihe dị mfe njikọ ahụ French TGV netwọk n'ihi na ị na nyefe. Journey oge bụ mkpokọta 1.5 awa.
Disneyland Paris – Ụgbọ oloko na-agba ọsọ ọtụtụ ugboro n'izu ofụri isua na kwa ụbọchị n'oge ezumike ụlọ akwụkwọ. Ụgbọ okporo ígwè dị n'akụkụ ọnụ ụzọ Disneyland. The njem na-ewe n'okpuru 3 awa ngụkọta.
Lyon, Avignon, na Marseilles- Kemgbe afọ a ụgbọ okporo ígwè na-arụ ọrụ site na 1 ka 5 ụbọchị kwa izu, n'agbanyeghị na ọ na -emetụta ya n'oge, yabụ hụ na ọ na -agba ọsọ mgbe ịchọrọ ya. Ọ na-akwụsị na Lyon Part-Dieu ojii (4.75 awa), Avignon TGV ojii (6 awa), na Marseilles St Charles ojii (6.5 awa).
Aime-La Plagne – operating
Amsterdam na Rotterdam – A ọhụrụ ọrụ nke malitere na 2018, ị nanị otu nke kwa ụbọchị ụgbọ oloko na Amsterdam, nke na-agụnye a na-akwụsị na Rotterdam. Kpamkpam njem oge bụ banyere 4 awa.
E nwere ndị ọzọ n'oge a kara aka ụzọ gasị dị maka eme ka oyi ski, otú ijide n'aka na-elele azụ mgbe ahụ ma ọ bụrụ na ọrụ bụ na-agba ọsọ.
Ọ bụ na-kwere omume iru ọzọ ebe n'ime Europe site tinye n'ọrụ a otu akawahade na aka iso gaa n'ihu si ụgbọ dị na Lille, Brussels, na Paris. Tickets nweta tiketi ụgbọ oloko dị mfe ma na-achọ naanị otu njegasi.
N'otu aka ahụ, ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị na-London si n'ebe ndị ọzọ na UK, ị nwekwara ike ịhọrọ amalite gị Eurostar njem Ebbsfleet International Stations ma ọ bụ Ashford International Station kama St. Pancras. Nke a bụ aka karịsịa nye ndị na ugbo ala, ka Ashford awade a na-adọba ụgbọala na-arụzi ụgbọala na kpọmkwem ịnweta ụgbọ okporo ígwè.
Book Tickets na Save A Train N'ihi na gị na London Iji Paris Train
Chọọ anyị na saịtị na akwụkwọ tiketi niile nke Europe ji mma ebe, na nsonye Belgium, Italy, Switzerland, na UK (gụnyere London na Paris ụgbọ okporo ígwè na Eurostar). Anyị search engine na-iji zọpụta ego na tiketi niile yana ịgụnyeghị akwụkwọ ntinye akwụkwọ. Anyị na-eme ka ọ dị mfe maka gị ịzụta site n'ịnakwere multiple ụzọ akwụ, tinyere kaadị, Giropay, iDeal, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ya mere, ihe ọ bụla gị ihe mere njem, ma ị na-eme njem nanị ma ọ bụ na ndị ọzọ na, iri a nkeji ole na ole ịchọ gbaa ụgbọ okporo ígwè na Save a Train, nke na-enye ndị kasị ala ahịa, na-ekwe nkwa.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-paris-train%2F%0A%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / pl na / nl ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
Train Travel Austria, Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe